Mukadzi wechiKristu anofanira kufukidza musoro wake kana zvaita sei? | Rudo rwaMwari
Kufukidza Musoro Kunoitwa Riini Uye Kuchiitirwei?
Mukadzi wechiKristu anofanira kufukidza musoro wake panyaya dzokunamata kana zvaita sei uye achizviitirei? Ngationgororei pakakurukurwa nyaya iyi nomuapostora Pauro afemerwa. Anotipa mashoko atinoda kuti tisarudze zvakanaka uye zvinokudza Mwari. (1 VaKorinde 11:3-16) Pauro anotiudza zvinhu zvitatu zvokufunga nezvazvo: (1) zvinenge zvichiitwa zvinoda kuti mukadzi afukidze musoro, (2) pazvinoitwa, uye (3) zvazvinoitirwa.
Zvinenge zvichiitwa. Pauro anotaura zvinhu zviviri: munyengetero nokuprofita. (Ndima 4, 5) Munyengetero kutaura naJehovha. Mazuva ano kuprofita kungareva kudzidzisa kupi zvako kungaitwa nomushumiri wechiKristu kuchibva muBhaibheri. Zvisinei, Pauro ari kureva here kuti mukadzi anofanira kufukidza musoro wake pose paanonyengetera kana kuti paanodzidzisa chokwadi cheBhaibheri? Kwete. Zvinoenderana nepaanenge ari nezvinenge zvaitika.
Pazvinoitwa. Mashoko aPauro anoratidza nzvimbo mbiri pazvinoitwa, mumhuri uye muungano. Anoti: “Musoro womukadzi murume, . . . mukadzi wose anonyengetera kana anoprofita musoro wake usina kufukidzwa anonyadzisa musoro wake.” (Ndima 3, 5) Mumhuri, murume ndiye akagadzwa naJehovha somusoro wemudzimai. Kana mudzimai akaita mabasa akapiwa murume wake naJehovha anenge achishora murume iyeye, saka anofanira kuratidza kuti ari kuremekedza simba rakapiwa murume wake. Somuenzaniso, kana achifanira kudzidzisa mumwe munhu Bhaibheri murume wake aripo, anofanira kuremekedza masimba ake nokufukidza musoro. Anozviita kunyange kana murume wake asina kubhabhatidzwa, sezvo ari iye musoro wemhuri. * Kana achifanira kunyengetera kana kudzidzisa mumwe munhu, mwanakomana wake muduku akabhabhatidzwa aripo, anofanirawo kufukidza musoro, kwete nokuti mwana uyu ndiye musoro wemba, asi kuti ane masimba akapiwa vanhurume vakabhabhatidzwa muungano yechiKristu.
Pauro anotaura nezvemuungano achiti: “Kana chero munhu upi zvake achiita sokunge anoita nharo pamusoro peimwe tsika, isu hatina imwe, uye ungano dzaMwari hadzinawo.” (Ndima 16) Muungano yechiKristu, vanhurume vakabhabhatidzwa ndivo vanotungamirira semisoro. (1 Timoti 2:11-14; VaHebheru 13:17) Vanhurume chete ndivo vanogadzwa sevakuru nevashumiri vanoshumira kuti vaite basa ravakapiwa naMwari rokufudza makwai ake. (Mabasa 20:28) Zvisinei, dzimwe nguva zvingada kuti mukadzi wechiKristu aite basa rinowanzoitwa nomunhurume akabhabhatidzwa. Somuenzaniso, angafanira kuitisa musangano webasa romumunda nokuti panenge pasina munhurume akabhabhatidzwa anokodzera. Kana kuti angaitisa paine munhurume akabhabhatidzwa chidzidzo cheBhaibheri chaagara achiitisa. * Anofukidza musoro achiratidza kuti ari kuziva kuti zvaari kuita zvinhu zvaifanira kuitwa nevanhurume, nokuti mabasa iwayo anotova emuungano.
Asiwo, kune zvakawanda zvinoitwa pakunamata zvingaitwa nehanzvadzi isina kufukidza musoro. Somuenzaniso, haafaniri hake kufukidza musoro pakupindura pamisangano yechiKristu, ari pamba nemba achiita ushumiri nomurume wake kana nomunhurume akabhabhatidzwa, kana kuti achidzidza uye achinyengetera nevana vasina kubhabhatidzwa. Zvechokwadi pangava nemimwe mibvunzo, uye kana hanzvadzi isina chokwadi neimwe nyaya, ingafanira kuita imwe tsvakurudzo. * Kana akaramba asina chokwadi uye hana yake ichida kuti adaro, hapana chakaipa akafukidza musoro, sezviri kuratidzwa nomufananidzo uri parutivi apa.
Zvazvinoitirwa. Mundima 10, tinowana zvikonzero zviviri zvinoita kuti mukadzi wechiKristu afukidze musoro: ‘Mukadzi anofanira kuva nechiratidzo chesimba mumusoro make nokuda kwengirozi.’ Chokutanga, ona mashoko okuti “chiratidzo chesimba.” Kufukidza musoro inzira inoratidza nayo mukadzi kuti anoziva masimba ayo Jehovha akapa vanhurume vakabhabhatidzwa. Saka, anoratidza kuti anoda Jehovha Mwari uye akavimbika kwaari. Chikonzero chechipiri chinowanika mumashoko okuti “nokuda kwengirozi.” Kufukidza musoro kwomukadzi kunei nezvisikwa zvomudzimu izvozvo zvine simba?
Ngirozi dzinofarira kuona masimba akaiswa naJehovha achiremekedzwa musangano rake rose, kudenga nepanyika. Dzinobatsirwawo panyaya iyi nezvinoitwa nevanhu vane chivi, pakuti idzowo dzinofanira kuzviisa pasi pourongwa hwaJehovha, izvo zvakatadza kuitwa nengirozi dzakawanda munguva yakapfuura. (Judha 6) Saka dzimwe nguva ngirozi dzingacherechedza mukadzi ane ruzivo uye ane pfungwa dzakapinza kupfuura munhurume akabhabhatidzwa ari muungano, asi mukadzi iyeye achingoramba achizviisa pasi. Pamwe pacho mukadzi wacho anenge ari muKristu akazodzwa uyo achatonga pamwe naKristu. Mukadzi iyeye achashumira ari pachinzvimbo chepamusoro kupfuura chengirozi. Muenzaniso wakazonaka wokuti ngirozi dzicherechedze! Chokwadi, iropafadzo chaiyo ine hanzvadzi kuratidza kuti dzinoteerera nokuzvininipisa padzinozviisa pasi nokuvimbika dzichionekwa nemamiriyoni engirozi dzakatendeka!
^ ndima 3 Mudzimai wechiKristu haawanzonyengetera zvinonzwika murume wake anotenda aripo, kunze kwokunge paine zvaitika, zvakadai sokuti haachagoni kutaura nemhaka yourwere.
^ ndima 1 Hapana hapo chikonzero chekuti hanzvadzi ifukidze musoro kana ichiitisa chidzidzo cheBhaibheri chayagara ichiitisa paine muparidzi asati abhabhatidzwa wechirume asiri murume wayo.
^ ndima 2 Kuti uwane mamwe mashoko, tapota ona Nharireyomurindi yaFebruary 15, 2015, peji 30; Nharireyomurindi yaJuly 15, 2002, pamapeji 26-27, neyeChirungu yaFebruary 15, 1977, pamapeji 125-128.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kufukidza Musoro Kunoitwa Riini Uye Kuchiitirwei?